DHAGEYSO:RWR Khayre oo Ganacsatada ka dalbaday ka qeyb qaadashada jiheynta DF | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DHAGEYSO:RWR Khayre oo Ganacsatada ka dalbaday ka qeyb qaadashada jiheynta DF
DHAGEYSO:RWR Khayre oo Ganacsatada ka dalbaday ka qeyb qaadashada jiheynta DF
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Ganacsatada Soomaaliyeed ka dalbaday in ay ka qeyb qaataan jiheynta Dowladda Federaalka, si wax looga qabto Musuq Maasuqa.
Khayre ayaa Ganacsatada u sheegay in ay awood u leeyihiin in Wasiirada ay u sheegaan meelaha ay qaladaadka ka jiraan, hadii arrimahaasi ay isku fahmi waayaana ay awood u leeyihiin in u yimaadaan Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha.
Wuxuu sheegay Ra’iisul Wasaaraha hadii aan Musuq maasuqa wax laga qaban, dhaqaalaha iyo amniga inaan wax laga qaban karin, sidoo kalena inaan la soo celin karin sharafta iyo kaaramada ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku baaqay in si wadajir ah loola dagaalamo Musuq Maasuqa, in la dhiso Wasaaradda Maaliyadda iyo in la keeno xal lagu xaliyo Deynta lagu leeyahay Dowladda Federaalka.
Wasaaradda Maaliyadda ayaa Todobaadkan soo bandhigtay wax-qabadkeedii sanadlaha ahaa, Wasiirka Wasaaradda Maaliyada oo ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay intii ay xukuumaddu jirtay ayaa sheegay in miisaaniyadda dawladda ay samaysay koror fiican oo lagu ammaani karo, waxuuna bogaadiyay sida ganacsatada Soomaaliyeed ay isugu xilqaameen bixinta cashuurta.
Madaxweyne Laftagareen Oo la kulmey Culimo ka socotey Turkiga-Sawiro